Home » Creative Writing » သွားမိတာ ငါ့အမှားပါ…ကျိုက်ထီးရိုးရာ…
Posted by alinsett on Mar 7, 2015 in Creative Writing, Critic, Environment, History, My Dear Diary, Photography, Travel | 44 comments
အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား အဟက် အဟက်
အခုတစ်ခေါက် ထူးခြားတာ နှစ်ခုရှိတယ်။
တစ်ခုက လမ်းတလျှောက်မှာ အရင်က ထိုင်တောင်းကြတဲ့နေရာတွေမှာ လူတွေကိုယ်တိုင် ထိုင်မတောင်းတော့ပဲ အလှူခံ ဆိုပြီး ပုံးလေးတွေ ချထားတာ။ ပုံးပေါ်မှာ စာရေးထားတာက လမ်းပြင်လုပ်သား အလှူခံ တဲ့ ။
It’s OK if you can
​တော်​ဘီ နီ​ပြောတာနဲ့ ကျိုက်​ထီးရိုး မသွား​တော့ဘူး ။ ​တောင်​တက်​ချင်​ရင်​ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ ကုလားမ​တောင်​ပဲ တက်​​တော့မယ်​ ။ ”
ဘုရား ဗန်းပြပြီး များတဲ့ အလှူခံတော့ မမြင်ချင်ပေါင်ဗျာ
ကိုအလင်းဆက်တို့ ခရီသွားတာ မှတ်သားစရာများပါ့။ ကျွန်တော်လည်း ကျိုက်ထီးရိုး သွားမလားလို့ ဒီလထဲမှာ။ ကျွန်တော် နောက်ဆုံးသွားခဲ့တာက ၂၀၀၃။ ကြာခဲ့ပါပီ။
ဒါတောင် ထမင်းဆိုင်တွေ ရိုက်စားလုပ်ပုံ ထည့်မရေးသေးဘူး။ အာဟိ
အလှူ ခံတွေနဲ့ မတူ.. ဓမြတွေနဲ့ တူတာအမှန်ပါဘဲ
ငါရောက်တုံးကတော့ အဲလောက် မဆိုးပါဘူး။ ကျီးကန်းပါးစပ်တို့ ဘာဂူညာဂူတို့တော့ မရောက်ခဲ့ဘူး။ ကားရပ်ပီး နှစ်နေရာ အလှူ ခံတယ်။။ လှူ သူရှိသလောက် ရှိတယ်.. အများစုက မလှူ ဘူး.. ငါလည်း မလှူ ခဲ့ပူး.. ဒါပေမဲ့ ဆိတ်ထဲ ဘီလိုမှ မီနေဘောင်…။ နိဟာက ကျောင်းသား အပျစ်ပုံဂျီးချဲ့တဲ့ ရွာဆိတ်စွမ်းအားရှင်လို ဖြစ်နေမှာဆိုးယို့.. စေတဏှာနဲ့ပေါဒါမှက်..။
ချဲ့ရေးရင် …အိုဇုန်းလွှာအပေါက်ကြီးလောက် ကျယ်သွားမှာစိုးလို့…
ဟိုတစ်လောကတော့ ကျိုက်ထီးရိုးအရမ်းသွားချင်နေတာ။ တောလမ်းဘက်က တက်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မသွားဖြစ်ခဲ့။ ဖားအံသွားလိုက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားလိုက်နဲ့ နိကို မနာလိုဖူးးးး
ဟမလေး ကျိုက်ထီးရိုးကိုဒါတွေကြောင့်သွားဖို့ကိုစိတ်မကူးဒေါ့ဒါ။ လူဆတွများကြောက်စရာလန့်စရာ ဂေါပက ကအစလောဘဇောတိုက်နေတော့ ဘယ့်နှယ့်လုပ်မဒုန်း
ကျနော်ကတော့ လူစုံတုန်း… ခံစားရတာလေးကို ပြောကြည့်တာပါခီညာ…
အဲလို အလှူခံ တွေကြောင့် တစ်ခါက သူကြီး ထိုးပြခဲ့တဲ့ စာရင်းကြီး မှာ တို့ မြန်မာများ တစ် နေတာပေါ့ ကွယ်။
အဆတ်သုံးပါဦး ဆက်ဆက် ရဲ့။ :))
ဟုတ်သား…အဲ့ဇာတ်ကို အဆက်သုံး အဆုံးသတ်ဖို့ ကျန်သေးတယ်…
၂၀၁၅ မကုန်ခင်…. (သို့မဟုတ်) ဒီတစ်ခေါက် ပွိုင့်တစ်သိန်း မပြည့်ခင်တော့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါမယ်လေ…
ခရီးသွား ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးလေး..ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုလို့.. ဝမ်းသာကျေနပ်မိ….
လာရောက် ဖတ်ရှုအားပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိ။
.ပို့စ်က ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ခရီးသွားဝေဖန်ရေးပေါ့။ ဘယ်လမ်းသွားသွား ဘာအလှူ ငွေမှ မထည့်နဲ့ သိလား။ အခုဆိုဈေးထဲမှာ အလှူ ခံတာ ကောင်းကောင်းမခံတော့ဘူး။ အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီး ပြောတာ။ ဟဲ့ ပိုက်ဆံလေး ၁၀၀ လောက်ထည့်သွားစမ်းပါဆိုတာ ဘာညာ ဆိုပြီး ဆဲရော။ ဟိုနေ့ကဆို အစ်မ ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်တုန်း အိတ်ထဲကို အတင်းဝင်နှိုက်တာ။ ဈေးထဲမှာ ဖက်သတ်တော့မလိုတောင် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ သူတို့ကို မကြောက်နဲ့။ ချသာချ။
ဆန်းဆန်းမြင်တိုင်း.. စေတီတည် စိတ်ဓာတ်တွေကို… ရပ်ပစ်သင့်..။
“ဟုတ်လား သိဘူးလေ” တွေနဲ့ လာတိုးနေလို့
.အဲ့လို စိတ်ဓါတ်နဲ့မို့ အဲ့လိုတောင်းစားနေရတာ…အဲ့လို တစ်ပြားမှ မရတာလို့..တွေးလိုက်မိတာပေါ့..
တစ်ခါတစ်ခါ ကွကိုယ်လုပ်စားရတာတောင် သူတို့က မလှူ ရင်ဘာဖြစ်၊ ညာဖြစ်ဆို နိဗာန်ဆော်တွေအော်ကြတော့ ကွကိုယ်တော်တော် အကုသိုလ်များကြီးနေပီလားပေါ့…
ဒါနဲ့ အဲ့ဒီ့အလှူ ခံသချင်း ပရဟိတ အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးရေ ဆိုတဲ့သချင်းက ဒီနှစ်City FM မှာ ဆုရသွားသဒဲ့… ဖြစ်ပုံများ :hee:
သီချင်းထဲက အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးကတော့ ရှားမှ ရှားပါကွယ်..
ခုနောက် နှစ်ပိုင်းတွေ မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပေါ့ သွားတဲ့သူတွေကတော့ ဈေးအလွန်ကြီးတဲ့ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် စရိတ်စက အလွန်များတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ခုလိုဆိုတော့ အတော် ဖူးချင်တာတောင် စဉ်းစားကာ နေရဦးမယ် ဖြစ်လို့နေပြီနော်။
ချိုးရေ ပုံးသေး တစ်ပုံးငါးရာ
ဟေဟေး တစ်ခါတစ်ခါ ကျိုက်ထီးရိုးကို တစ်နှစ်သုံးခေါက်ရောက်တယ် ခြေလျင်တက် ခြေလျင်ပဲဆင်းတယ်။ ငါးဆယ်တန်တစ်အုပ် တစ်ရာတန်တစ်အုပ်လဲသွားတယ်။ တွေ့သမျှ အကုန် အဲ့ဒါပဲလှူတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးကိုတော့ အံတိုနေပြီ။ ဘယ်နေရာဘာဆိုတာ သိပြီးသားဆိုတော့ ပြုံးပြပြီး ငါးဆယ်တန်မဟုတ်ရင် တစ်ရာတန်လှူပြလိုက်တယ်။ ပြီးပြီလေ နောကြေနေပြီဆိုတော့။ နှစ်တိုင်းလည်းသွားတယ်။
.အောင်အောင်(ထောင်ဂျီး) လိုမျိုး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးသွားချင်လိုက်တာ
အဲ အန်တီအေး ပြောပြတာလေး ဖတ်ပြီးတော့မှဘုရားပေါ် နာရီ ၃၀ လောက် ရှိခဲ့တာမှာ
အနော် တက်ဖူးတဲ့ တောင်တချို့ ( ပေငါးထောင်ဝန်းကျင်တွေရယ်ပါ)
နေ့ခြင်းအပြီးတက်တယ်ဆိုတာ- ခြေလျှင်နဲ့တက်ရတာဖြစ်ပြီး အသွားအပြန် တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောက်အထိ ၃ခေါက်တက်ရတာပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်ကျော်က ရောက်ခဲ့တာ။အလင်းဆက် ရေးတဲ့ အတိုင်းပဲ၊အဲဒီကတည်းက စိတ်ပျက်ခဲ့တာ။